जोस र जाँगरकासाथ आएका थियौँ, तर सोचेजति काम गर्न सकेनौँ : बस्नेत (अन्तर्वार्ता) - हाम्रो शब्द
जोस र जाँगरकासाथ आएका थियौँ, तर सोचेजति काम गर्न सकेनौँ : बस्नेत (अन्तर्वार्ता)
तत्कालिन डुम्राहा गाउँ बिकास समिति (गाविस) को उपाध्यक्षसमेत भएका रुद्र बहादुर बस्नेत हाल सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका वडा नं ८ का वडाअध्यक्ष हुन् । बस्नेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुनसरी जिल्ला कमिटी सदस्यसमेत रहेका छन् ।
तत्कालिन गाविस उपाध्यक्षसमेत भएका र राजनीतिमा लामो समय सक्रिय रहेका बस्नेत वडाअध्यक्ष हुदैगर्दा उनले केहि नयाँ र अर्थपूर्ण काम गर्छन कि भन्ने अपक्षा आम जनतामा हुनु स्वाभाविक नै हो । के बस्नेतले जनताको मन जित्न सफल भए त ? यी र यस्तै बिषयमा उनै बस्नेतसँग हाम्रो शब्दले गरेको कुराकानीको संपादित अंश यसप्रकार छ ।
तपाईले करिब ३ बर्षे कार्यकाल कसरी बिताउँनुभयो ? तपाइँप्रतिको अनताको अपेक्षा कति पुरा गरेजस्तो लाग्छ ?
जनताका अपेक्षा पुरा गर्ने नै मुख्य उद्देश्य हो हाम्रो । त्यहि अनुसार काम पनि गरिरहेका छौँ । यस्तो हुदोरैछ, हामी जोस र जाँगरकासाथ आएका थियौँ, तर सोचेजति काम गर्न सकेनौँ । किन सकिनौँ भने, जनताका आकाक्षा धेरै छन् । बजेट पनि कम हुन्छ । के गर्ने के नगर्ने ! मेरो ब्यक्तिगत कार्यकाल भन्नु वडाको समग्र चित्र हो लगभग । मैले हाम्रा वडाबासी जनतालाई केन्द्रमा राखेर नै काम गरिरहेको छु । अपेक्षा धेरै छन्, सकेसम्म पुरा गरेजस्तो लाग्छ । तर बजेट अभाव लगायतका कारणले सबै अपेक्षा पुरा गर्न नसकिरहेको अबस्था छ । अब वडासँग करिब १ करोड ५० लाख बजेट हुन्छ । जनताले भौतिक बिकास (बाटो बनाउँने आदि) लाई मुख्य मान्छन् । त्यसका लागि बजेटले कसरी भ्याओस भन्नून । तैपनि हाम्रो वडाका धेरै बाटाहरु ग्राबेलसम्म गरेका छौँ ।
शिक्षाको अबस्था के छ तपाईँको वडामा ?
गाउँको वडा हो । वडामा एउटा निजि विद्यालय र २ ओटा आधारभूत सामुदायीक विद्यालय छन् । तुलनात्मक रुपमा यस्तै हो । शिक्षा अबस्था राम्रै छ । मुख्य समस्या भनेको विद्यालयमा दरबन्दी अभाव छ । विभिन्न निकाएसँग कुरा गरिरहेका छौँ त्यसका लागि ।
बर्षौँदेखि दरबन्दी नभएका विद्यालयमा के राम्रो होलार शिक्षा ?
एउटामा त्यस्तो दरबन्दीको समस्या छ । अब के गर्नू, स्थानीय सरकारले आफै शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्दैन । माथिल्लो सरकारका निकाएहरुसँग कुरा त गरिरहेका छौँ ।
तपाइँत स्थानीय तहअन्तर्गतको सुशासन समितिको संयोजकसमेत हो । तपाइँको समिति भूमिकाविहीन छ नी । तपाइँ नगरसभामा प्रतिबेदनसमेत बुझाउँनुहुन्न क्यारे ?
हैन नी ! प्रतिबेदन बुझाको छ नी । कहाँ नबुझाको छ र ? बाहिर निस्क्रिएजस्तो देखिए पनि हाम्रो समितिले काम गरिरहेको छ ।
खै तपाइँको समितिका अन्य सदस्यले खासै काम नै भएन भन्छन् ?
हैन, त्यस्तो नभन्नुपर्ने ! कसले त्यस्तो भन्यो र ?
हाम्रो नगरभित्रको यौटा सम्पति भनौँ, रामधुनी मन्दिर । त्यसको ब्यबस्थापन समितिमा तपाईँ पनि सदस्य हुनुहुन्छ । जनप्रतिनिधि पनि हो तपाईँ । ‘रामधुनी मन्दिरको सोचेजति बिकास गर्न सकिएन’ भनेर मैले भनेभने तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
पहिलाको तुलनामा केहि बिकास त भएको छ । तर तपाईँको भनाईमा म सहमत पनि छु । हो, रामधुनी मन्दिरको सोचेजति बिकास गर्न सकिएन । तर यसको अर्थ केहि नै नभएको भन्ने होइन । मैले पनि अघिल्लो साल वडाको तर्फबाट १ लाख बजेट दिएको थिएँ । नगरपालिकाले पनि यो बर्ष ५० लाख बजेट छुट्याएको छ । अघिल्लो बर्ष प्रदेश सरकारबाट आएको ५० लाख बजेट साथीहरुको कमजोरीका कारणले खर्च हुन सकेन । मन्दिरको भित्र बिभिन्न खालका संरचना बनेका छन् । त्यसको धर्मिक महत्व कति हो ? त्यसको ऐतिहासिक महत्व नै खल्बलिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । त्यसमा सचेत हुन जरुरी छ । हामीले रास ताल, संकरबेली र रामधुनी मन्दिर लगायतलाई पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा बिस्तार गर्ने दीर्घकालिन योजना नै बनाएका छौँ । आगामी बजेटबाट त्यो कुराको सम्बोधन हुन्छ ।
ठिकै छ, फेरी वडाको बिषयमा आऊँ, के छ अबको करिब दुइबर्षे कार्यकालको योजना ?
अब जनतासँग निरन्तर संवाद गर्दै उनीहरुका अपेक्षा सकेसम्म पुरा गर्ने हो । वडाअध्यक्षले धेरै के पो गर्न सकिन्छ र !
युवाहरुका लागि ठोस कुनै योजना छैन ?
सीपमुलक तालिमहरुका आयोजना गरिरहेका छौँ । मुख्य कुरा हाम्रो वडा कृषिमा बढी सम्भावना भएको वडा हो । सामुहिक खेती, पशुपालन लगातका कुरामा हामीले युवाहरुसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ ।
– वडाअध्यक्ष बस्नेतसँग हाम्रो शब्दले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
‘सदाबहार राष्ट्रिय टिकटक स्टार प्रतियोगिता २०७७’ इलामकी सरिताले जितिन्